SingForYou.net - ShellyPhyo's Channel
ShellyPhyo 's Channel
Contest Winner hiphop
End date: 09/11/2011
Last Login: 06-10-2012 08:04
Channel Views: 7,081
ဘ ၀ ရဲ့ ပျော် ရွှင် စ ရာ တစ် ခု ထဲ သော ထွက် ပေါက် ( သီ ချင်း ဆို ခြင်း )
စေ တ နာ ကောင်း ရင် ကံ ကောငး မယ် :)
Hello!!!!! လည် လည် လာ ကြတဲ့ သူများ အားလုံး.ကို ကော်ဖီ ခါး ခါး လေးနဲ့ ရှယ်မုန့် တွေနဲ့ ဧည့်ခံ ပါ တယ် ရှင့် .မောင် နှ မ များ အား လုံးး ပျော် ရွှင် ချမ်း မြေ့ စွာ .စိတ် အ နှောင့် အ ယှက် ကင်း စွာ သီချင်း လေး တွေ ဟစ် ကြွေး ရင်း တ ဒ င်္ဂ စိတ် အ ပန်း ပြေ ကြ ပါ စေ လို့ .. ဆုတောင်း ပေး ပါ တယ်ရှင့်...း))
mrzawzaw111 on Jun 6, 2012
punkkotawlay89 on May 25, 2012
Phoehtaung on May 13, 2012
.....ရှယ် လီ မ မ.... အ သံ မ ကြာ; တာ ကြာ လို့ ဘာ ဒေ မျာ; လုတ် နေ သ ဒုံ; လို့ လာ ကြည့် တာ ......... မစ် နေ တုန်; ပါ လာ;..........
sthu on May 11, 2012
linkhit on Mar 27, 2012
ယုံတယ် ဟုတ် ကို ဆိုထားတာအရမ်းကောင်းတယ် အမေ၇ အားပေးသွားတယ်နော်
kokophyo80 on Mar 21, 2012
. ဖြိုး ရဲ့ အသံလည်းကောင်းတာပဲ ။ ဒီဆိုဒ်က လူတွေအကုန်လုံးကို စီးရီးထုတ်ပေးရင် အကုန်လုံးပေါက်မှာသေချာတယ် ။ လာရောက်အားပေးသွားပါတယ်နော်။
whitecolour on Mar 19, 2012
မမဖြိုးရေ..လာလည်ရင်းကော်ဖီခါးခါးလေးနဲ့ရှယ်မုန့်တွေစားရင်း မမဖြိုးရဲ့အသံချိုချိုလေးနဲ့ဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးတွေကိုလဲအားပေးနားဆင်သွားပါတယ်နော် ပြန်တော့မယ်နော်မမဖြိုး နောက်မှပြန်လာလည်မယ်နော် အဲ့ကျရင်လဲမုန့်ကျွေးဦးနော်...
chitphoo24 on Mar 18, 2012
Legend on Mar 18, 2012
u have suchabeautiful voice :)
minseinkoko on Mar 12, 2012
thawsmith2011 on Mar 5, 2012
MalLodii on Feb 29, 2012
မမ သီချင်းဆိုထားတာတွေအရမ်းကောင်းတာ် sis အားပေးသွားပါတယ် နော်း)
kate29 on Feb 23, 2012
အဆိုကောင်း အသံချိုချိုနဲ့ ညီမလေးရေ ... မမ လာလည်သွားတယ်နော် ... အားကျတယ် ... အဲလို အဆိုကျွမ်းပြီး အသံကောင်းသူတွေကို ... သီချင်းလေးတွေကို အားပေးနေမယ်နော် ...
kaunglay01 on Feb 17, 2012
i came and visit to ur home , nice vocal and beutiful vocal :) just come and go song r beautiful par love it bye for now
ALin on Feb 4, 2012
လာလည် သွားတယ်နော် ..... ဒီ ဆိုဒ်လေးမှာ ရှယ်လေး သီချင်း သက်သက် အားပေး သွားတယ် .... rnrnwww.mm-flashsongs.com လေးကိုလဲ လာလည်ဦး . ရှယ်လေး သီချင်းတွေ အကုန် Flashsongs နဲ့ လုပ်ပေးမယ် .... ။
ahlwan69 on Feb 3, 2012
you haveawonderful vocal. great.
babycheetah on Jan 20, 2012
shwepaleik on Dec 27, 2011
ညလေးဖြိုးဆီကို ရောက်ပြီးဘီထင်နေတာ...။မွေးလတူလို့ပိုခင်သွားပါတယ်နော်...။ ;-)
thanzawmg on Dec 27, 2011
mage yea your singing is good mood and good voice
kathyoo20 on Dec 23, 2011
လာလည်သွားတယ်နော် သီချင်းတွေလည်းနားထောင်သွားတယ် ရုပ်လေးကလည်းချော အသံလေးကလည်းအရမ်းကောင်း
kinsaro1 on Dec 19, 2011
tharlikar on Dec 11, 2011
မမ လာလည်သွားတယ်.... l love ur channel ^_^
koluzoe on Dec 4, 2011
hey nyi ma lay ....i visited your channel i like all your songs like it <3<3<3 haveanice day
emptyheart on Dec 1, 2011
လာလည်သွားပါတယ်..... သီချင်းလေးတွေ နားထောင်သွားပါတယ်
brianster7 on Nov 22, 2011
soesoelay on Nov 22, 2011
hi sis i visit ur channel i like it :O
romy on Nov 7, 2011
လာလည်သွားတယ် အစ်မရေး)
MarPheeYarr on Nov 7, 2011
မွှားးးးးးးးးးးးးး ဘာမှမပြောခင် အာဘွားရင်ပေးပလိုက်တယ်.. ဟီဟိ.. အသံရော လူရော ချစ်ဖို.ကောင်းလွန်းတဲ့ နာ့တူမလေးးး ... ချစ်လွန်းလို. အကြွေးလေးတွေ ကူဆပ်ပေးနော်.. ဟီဟိ .. ဝမ်းမောရ် မွှားးးးးးးးးးးးးးးးးး
yo !! lar lae twar tel naw :)
happylaminn on Nov 4, 2011
hi phyo...i visit ur channel....nice to meet u...:)cyn
akertuntun on Nov 2, 2011
nyanthit on Nov 1, 2011
it's good to haveachance knowing u and u good as well in singing keep on and thx for ur comments on mine
fredylinn on Oct 31, 2011
lar lal twar del naw sis'
khathtannay on Oct 24, 2011
လာအားပေးသွားလို့ ကျေးဇူးဗျို့ ဖာဖာထေးထေး ဝေဖန်သွားလို့ကျေးဇူး rnဒီနေ့မှစဆိုတာ တောက်ရောက် မြောက်ရောက်နဲ့ပါဗျာ
singercrazy on Oct 10, 2011
hirni want to friend with u
santimaung on Oct 6, 2011
lar lel twar the phyo yay nay tine so par naw
sushi27 on Oct 4, 2011
ဖြိုးလေးရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရနေ့ မှာအိမ်လည်လာတယ်နော်....အမှတ်တရသီချင်းလေးတွေကိုအရမ်းကြိုက်တယ်ဖြိုးရေ...နောက်လဲ သီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေများကြီးဆက်ဆိုပါဦးနော်....ချစ်ဖြိုးလေး...း)))
H-H-H on Oct 4, 2011
May_La_Yaung on Oct 4, 2011
ဖြိုးဆီမှာ ကော်ကော်လာသောက်တာ.. မုန့်လဲစားသွားတယ်နော်.. ချစ်ဆုံးလေးဖြိုးက ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့် လှနေတာပဲကွာ..း)
friendlylady on Sep 29, 2011
ဖြိုးရဲ. ကော်ဖီကို သီချင်းတွေနားထောင်ရင်း စောင့်တာ သီချင်းဆုံးတဲ့ အထိ ရောက်မလာလို. နားအရသာဘဲ ခံစားနားဆင်သွားပါတယ် နော်
june28 on Sep 28, 2011
လည်လည်လာပါတယ်ဗျို့..ခန်းဆီးအသစ်လဲတာ လာကြည့်ရင်း သီချင်းတွေနားထောင်သွားတယ်..ကော်ဖီက တို့အတွက်နည်းနည်းခါးနေလို့ ရေနွေးရောသောက်သွားတယ်..း))
mattayathar on Sep 26, 2011
အလည်လာသွားပါတယ်ဗျီု့.... လာသာလည်ရတာ... ခြံစည်းရိုးတွေပဲကာထားတာတွေ့ရတယ်... ကော်ဖီတိုက်မယ်ဆိုပီးတော့... အိမ်ထဲကနေပီးတော့ပဲ ပြုံးပြနေတယ်..... :P
paukalay on Sep 25, 2011
Hello Phyo lay!!! I like coffee too...hee.. I have had2cups of coffee with your lovely songs. I wanna be your friend. Is't OK?
mikekhal on Sep 25, 2011
အိ.... ဘယ်မလဲ တွ .. လူဇိုး မမ ရှိတာ လား ရှိဘူးလားး မီ်းး ရဲ တိုက်ကို ပြန်ပေးးး အချစ်ချင်း တူရင် စစ်ခင်း ယူမှာ နော်.. ခုမှ ကိုယ့် ချန်နယ် ပြန်ကြည့်မိလို့ ချက်ချင်း ကို မီရာ နဲ့ လိုက်လာ တာ.. ရဲ တိုက် လေးကို ပြန်မပေးရင် . ဒီ ချန်နယ် ထဲကနေ ဘယ်မှ တွားတော့ ဘူး ကွာ.. ဘာဂါ ကြီး က ကြီး ကြီး ပဲ .. ကုန်ဘူးး ရော့ နည်းနည်း ပြန်စားးး.. ရဲတိုက်ကို ပြန်ပေးနော်.. အဟိ .. ပျော်ရွှင် ပါစေ ချစ် သဲ ရေ...
Deih on Sep 25, 2011
ဖြိုးဆီသို့ အလည်တစ်ခေါက် လာပါတီ. သဘောမနောကောင်းလိုက်တာနော်. ဧည့်ခံထားတဲ့ စားစရာတွေက အလျှံပယ်ပါလား. ဖြိုးရဲ့ သချင်းတိုင်းနှစ်သက်ရပါတရ်ကွယ်. မပီတာလေးကိုက ချစ်စရာကောင်းလို့ ကွန်မန့်တွေထဲ ရေးမိတာ ချိတ်ချိုးရင် ထိပ်ထိုးမလို့ (လုပ်ရက်ပါဘူးနော်) လိုက်လာတာ. အားပေးလျှက်. ဒိတ်
katiesnow on Sep 24, 2011
sis yay mee tot ye mix lay bae tot lar mar le hin.
mamamg on Sep 22, 2011
Khu ma paw lar so nay ma kg loe par.. So chin yat nae ma so naing tae bawa ka so lite tar bare.. phyo doe ko ayan miss nay khae tar..
yakaunt on Sep 21, 2011
လာလည်ပြီးကော်ဖီသောက်ရင်းသီချင်းလေးတွေကိုနားထောင်သွားပါတယ်ဗျာ အရမ်းကောင်းပါတယ် အားပေးလျက်ပါ
babinalay on Sep 20, 2011
ဟမ်းညီမလေး၇ယ်လူလည်းချေား အသီလေးဆိုလေးလည်းကောင်း အ၇န်းကိုလှတယ် အားပေးတယ်နော
PPA on Sep 19, 2011
nice song ###
dennis07 on Sep 17, 2011
amrith on Sep 16, 2011
ဒီ Channelအသစ်ကလေး ကိုအမှတ်တရလာလည်သွားပါတယ်မဖြိုးသီရိရေ.......သီချင်းတွေအားလုံးကတော့အထပ်ထပ်အခါခါ နားထောင်ပြီးသားလေးတွေပါ........အဆိုရောအသံကတော့အရမ်းကောင်းပြီးသားပါဘဲ နော်.....သီချင်းတွေဆိုရင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်း.........
linnhtetmaw on Sep 14, 2011
မ အခုဘယ်မှာနေတာလဲမ။သိချင်လို့ပါ :) လာလည်သွားတယ် see ya and looking foward to you new songs
လည်လည်လာသွားပါတယ်..စစ်ဖြိုးရေ... ကော်ဖီသောက်သွားတယ်ဗျို့ ...ငတ်နေလို့ အဲ ပေါ်ကုန်ပြီ ဟီးဟီး ကော်ဖီကြိုက်လို့ပါ ..:)
kohlaing on Sep 11, 2011
Coffee lar drink yin ne song twe ko nar sin twar kelbnaw, coffee le kyite,tha chin le khite, arr lone mite*****
naymin15 on Sep 9, 2011
အလည်လာရင်း သီချင်းတွေ ရှာဖွေနားဆင်သွားပါတယ် အန်တီဖြိုးး အဲမှားလို့ ရှယ်လီဖြိုး :))))
may85 on Sep 6, 2011
ဆုတောင်းကောင်းတဲ့တူမလေးရေ လာလည်ရင်း ကော်ဖီလေးသောက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာပါနော် အိပ်ချင်ပြေသွားတယ် ကော်ဖီချစ်ကောင်းကြောင့်..ခိခိ
minchit on Sep 4, 2011
အဆိုကလည်း အ၇မ်းကောင်း..ရုပ်ရည်ကလည်းမင်းသမီးရှူံးလောက်ချောတဲ့ စစ်ဖြိုးလေးဆီ လာလည်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
myatlay on Sep 2, 2011
great sis lay yae,,,sing more naw..
JuJu on Aug 31, 2011
ဖြိုးရေ လာပြန်လည်သွားတယ်နော်။ ဟိဟိ လူကတော့ ရွက်ကြမ်းရေကြိုပါ။ သူများတွေ ကိုယ်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ရင်အားကျပ။ ဒါပေမယ့်လေ အသံနဲ့ပဲနှိပ်စက်ပါ့မယ်။ ဒီကရုပ်နဲ့တော့ နှိပ်စက်တော့ပါဖူး :P
heavyphyoe on Aug 31, 2011
ဘူလဲတော့မသိဘူး... အဆိုကောင်းမှန်းတော့ သိတယ်... ဟဲဟဲ.. ကျန်သေးတယ်... ရုပ်လှ အသံကောင်း..... စကေးမန်း စာရင်း ၀င်ပါပဲဗျာ.... အခုတော့ နာမည်ပါ..လန်းလာပီ...းပီ.... နာမည်အတွက်လည်း... ၅ စတားစ်ပေးပါတယ် ဗျာ....းပီ.... ဟိဟိ ၀ူးးးးးးးးးးးးး ပြန်ပီ... ဘာမှ လည်းမစားရဘူး..း(
susu23 on Aug 23, 2011
ချစ် တုံး လေး ဖြိုး ဆီ ကို မမဆုဆု အ လည် လာ သွား ပါ တယ် ...ကော် ပီ ခါး ခါး တစ် ခွက် သောက် သွား တယ် စစ် လေး ရေ.......။.။
klnyi on Aug 22, 2011
့ဖြိုးဆီလာလည်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ။ သီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေရှာဖွေ နားထောင်ပြီး၊ ကော်ဖီသောက်၊ မုန့် တွေလဲစားသွားပြီနော်..နောက်ကိုလဲ မကြာ မကြာလာလည်ဦးမယ်.....
moemakhawin on Aug 22, 2011
Nice,very nice. ....အရမ်းကောင်းပါတယ်၊နောက်လည်းအားပေးချင်ပါသေးတယ်၊သီချင်းကောင်းလေးတွေဆိုပြပါဦး၊---------
အလည်လာသွားပါတယ် ညီမလေး..သီချင်းကောင်းလေးတွေဆက်လက်သီဆိုပါအုန်းလို့ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းသွားပါတယ် ))
mange on Aug 21, 2011
စစ် ဖြိုးလေးရေ ... လာလည်တယ်နော် ... သီချင်းလေးတွေ ထပ်ဆိုပါအုံး ... အားပေးနားဆင်ဖို့ စောင့်နေတယ်နော် ... အရာရာအဆင်ပြေ ပျော်ရွင်ပါစေရှင် ...
DAVIDPHYO on Aug 19, 2011
tarpoelay on Aug 8, 2011
စစ်ရေ..ဒီနေ့ ပဲ စစ်ရဲ့သီချင်းကို စနားထောင်ဖြစ်ပြီး ချက်ချင်းပဲ အလည်လာသွားပါတယ်ခင်ဗျ..ကော်ဖီနဲ့ မုန့် မကြိုက်လို့သီချင်းလေးတွေပဲ နားဆင်ပြီး ပြန်သွားပါတယ်ဗျို့ ..ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
laylwintthu on Aug 8, 2011
ချစ်ဖြိုးလေးရေ.. ဒီမှာပဲလာလည်သွားလိုက်ပီနော်.. ဒီဧည့်သည်ကတော့ ကော်ဖီခါးခါးမကြိုက်လို့ ရှယ်မုန့်တွေပဲစားသွားပါတယ်နော်.. ချစ်စရာအပြုံးလေးနဲ့ ချစ်စရာအသံချိုပိုင်ရှင် ချစ်ဖြိုးလေးဆီ လာလည်ရင်းးးးးး သီချင်းဆိုရင်.. ဘ၀အမောတွေဖြေနိုင်ပါစေလို့နော်.. ^_^
music-rocker on Aug 8, 2011
ရော့ခ်ကာ ကြီးရေ..ဒီချင်းလေး အတော်ကြိုက်တာပါ..ဆိုထားတာလေး ခပ်မိုက်မိုက်ပဲ..နားထောင်ရတာ အားပေးသွားပါတယ်..း)))))) ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေက အသံနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးနာထောင်လို့ကောင်းပါတယ် ....ဘ၀ရဲ့..ပျော်ရွှင်စရာ တစ်ခုတည်းသော ထွက်ပေါက် (သီချင်းဆိုခြင်း) ထပ်တူထပ်မျှပါ ... MUSIC..ROCKER..
ဒီ channel အသစ်လေးကို လာလည်ရသေးဖူး...ဟား..မိုက်တယ် .. ကော်ဖီခါးခါးဆိုကြိုက်မှကြိုက်ပါပဲ ... မုန့်မစားရလဲ နေပါစေ..ကော်ဖီတော့ အကုန်သောက်သွားမယ်နော်..ဟီး... လာလည်ရင်းနဲ့ သီချင်းတွေအကုန်နားဆင်သွားပါတယ် စစ်လေးရေ.. သီချင်းအများကြီးဆိုပါဦး..အမြဲတမ်း အးပေးနေပါတယ်....အသံကောင်းအဆိုကောင်းတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စစ်လေး အမြဲပျော်ရွင်ပါစေလို့ အမှတ်တရ ကွန်မန့်ချန်ရင်း ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်း)
foreverloveman on Aug 7, 2011
သီချင်းလည်း နားထောင်းရင်း ကော်ဖီလည်း သောက်သွားတယ်ဗျာ..တစ်ခွက်တည်း မ၀ လို့ နှစ်ခွက် သောက်သွားတယ်နော်....ယခုလို ဧည့်ခံတာ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။ ရုပ်ချောပြီး၊ စိတ်ထားဖြူစင်သော ညီမလေး လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပြီး..ထာဝရ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..................
myukhoe on Aug 4, 2011
မန်ဘာအသစ် ရှယ်လီလေးကို SFY မှ မောင်နှမများမှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းစကားလေးလာပါးပါတယ်ခင်ဗျ.... အဆိုကောင်းရုံတင်မက ရုပ်ပါချောတော့ SFY ၀ိုင်းတော်သားများမှ အထူးအထူးပင် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြောင်းပါ ထပ်လောင်းပြောဆိုလိုပါတယ်... သီချင်းတွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်း မသိနားမလည်လိုသည်များရှိပါက.. အားမနာစတမ်း ကျွန်တော် ကိုမောင်မြူခိုးကို မေးနိုင်ပါတယ်လို့ ထပ်ဆင့်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်... ၀ါသနာပါရာ သီချင်းလေးတွေဆိုရင်း တစ်နေ့တာဘ၀အမောများကို ဖျေဖျောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်. ရှယ်လီလေးရေ... ။ :P
zawaung222 on Aug 2, 2011
View All Recordings of ShellyPhyo